Anogovera mvura → HoReCa • Mahotera • Mahotera • Kudya kweWarsaw
Iwe unoda here mvura inogovera muhotera, hotera? Iyo kambani yeWater Point inopa dzisiri-cylinder mvura dzinogadzira mvura, vanonwa doro, iko kunobva vatungamiriri venyika muindasitiri, yatagovera ndega muPoland.
Hunhu hwakanaka mvura yakakosha kuhupenyu uye inofanirwa kuve iripo nguva dzose, kumba uye kubasa.
Zvakare munzvimbo dzakadai maresitorendi, kofi, mabara i Hotels zvakakosha kuti vashanyi vagare vaine mukana wekusingaperi kuwana inonaka uye ine hutano mvura.
Iyo mvura inopihwa inofanira kusangana nezvinotarisirwa nevatengi, zvakanyanya uye zvakanyanya indasitiri HoReCa muPoland, inoshandisa mhinduro dzepasi rese, kuishongedza zvivakwa zvadzo nevagari vemvura vakachena uye vane hutano, matsime nevanonwa veruzhinji.
Iko kushandiswa kweruzivo rwekugadzira matekiniki anobvumira kugadzirwa kwemhando yepamusoro yemvura yekugovera zvigadzirwa zvinosangana nezvinotarisirwa kunyange nevatengi vanonyanya kuda.
Vanogariswa vanogadzira vanogonesa kushandiswa kwemazuva ese kwemhando yepamusoro yemvura mumahotera, dzimba dzevaeni, mabara uye maresitorendi, i.e. kupi zvako pazvinofanirwa kutora kuchengetedza uye hutano hwevaenzi vanoshanyira nzvimbo idzi.
Anogadzira mvura muhotera, maresitorendi kana cafe anofanirwa kuratidzwa nekunyanyisa kwakanyanya kwekugovera mvura uye tekinoroji yekutonhora inoshandiswa.
Mvura yekunwa mvura yekushandisa inoitirwa chikamu cheHoReCa inofanirwa kuvakwa nenzira yekuti ive nechokwadi chehutsanana hwakakwana hwekushandisa.
Yakadaro disenser inogona zvakare kuwedzera kune mvura yekuseta system kana CO2 silinda.
Vanogovera mvura maresitorendi kana mahotera vanoona mhando yepamusoro yemvura yekunwa inoshandiswa nevaeni.
Zvitubu zvemazuva ano uye vanonwa mvura vanogadzira zvakachipa kushandisa uye zvakanyatsoshanda, uye zvakakurumbira pamusika, kuverengera mukurumbira weresitorendi, kofi kana hotera, uye yakakwirira yekushumirwa kwevashanyi. Imwe mukana ndeyekugadzirwa kwemazuva ano kwemashandisi, ayo anoita kuti vanonwa vashongedze chero nzvimbo.
Inonwiwa mvura inogovera inovimbisa kuwana yakanyanya kunaka mvura yemunhu wese, nguva dzese.
Chiyero chehotera, nzvimbo yekudyira kana yetsi inokurudzirwa, pakati pevamwe, nehunhu hwemvura yekunwa yakashandiswa ipapo. Kana yakanyatsogadzirirwa uye yakashandiswa, semuenzaniso mukaravhani neimu uye mint, saka inonaka huru uye inotaridzika panguva imwechete, ichaita zvechokwadi mufananidzo wenzvimbo.
Inonaka uye yakatsva, isina dhiziri, chlorine uye hutachiona, iyo mvura inogona kubva kunevamazuvano emvura yekugezesa mvura. Iyi mvura yakanatswa, yakanatswa inogona kutumirwa mumabhodhoro kana pamakara, kana iwe unogona kugadzira mandimu anozorodza kubva mairi.
Vanhu vazhinji vanoshandisa michina yemazuva ano yekuchenesa mvura mudzimba dzavo uye vanotarisira kuti kana vachishandisa masevhisi ehotera kana hotera, vanoshandisa zvakare mvura yakachena uye yakachena.
Kubatira mvura kubva kune inogovanisa kuchave nechimiro chakanakira pamufananidzo wenzvimbo, uyo ane hanya nehutano hwevaenzi vayo uye nharaunda, nekuti nekuda kwechigadzirwa ichi huwandu hwemarara hunogadzirwa hwakaderedzwa zvakanyanya.
Mvura yakarongedzwa nenzira iyi inogona kubatsira kwazvo muzhizha kune vese vane nyota, avo saka vachazonyanya kusarudza kushandisa masevhisi eresitorendi.
5 / 5 ( 24 mavhoti )
mvura vending muchinamvura yemahara muhoteramvura yemahara muresitorendimvura inopisa muhoteramvura yemahara muhoteramudziyo wemvuramudziyo wemvuramudziyo wemvuramvura inogovera hoteramvura inogovera kumarestaurantkabhoni yakagadziriswa mvura disenserhc66l mvura inodururiramvura yekuburitsa mvura mutengotap mvura disensermvura inodzimacarbonation yemvurafiriji ine disenser yemvuramvura gassing muchinamudziyo we gassing mvuramudziyo wemvura inonzi carbonatedYega mvura muresitorendimvura yegastronomymvura yeresitorendimvura inotsemuka kubva kupombimvura yemaminerari muhoteramvura mubhawamvura mune gastronomymvura muhoteramvura mune cafemvura muresitorenditapa mvura muhoteratapa mvura muresitorendimvura yemvuramvura inotonhora muhotera